Ezi ziimveliso eziphelelwe lixesha zika-Apple ukusukela nge-30 kaJuni ka-2017 | Ndisuka mac
Ezi ziimveliso ezingasasebenziyo zika-Apple ngoJuni 30, 2017
I-Apple ihlaziye nje uluhlu lwe Iimveliso eziphelelwe lixesha okanye zeediliya, Esebenza ngoJuni 30, 2017. Oku kuthetha ukuba iApple ayibangi ukuba inokubuyiselwa endaweni yezixhobo zakho ukuba uyayifuna. emva kokuya kwinkonzo yabo yezobuchwephesha: iVenkile yeApple okanye iNkonzo yobuGcisa boRhwebo yohlobo. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ubomi obuluncedo lwezixhobo zethu bandiswa ngaphandle komhla oboniswe yiApple. Iikhompyuter ze-Apple, ngakumbi ii-Macs, zibonakaliswa ngokuba nobomi obude obuluncedo kwaye kunokwenzeka ukuba uzigcine ixesha elide.
Ewe kunjalo, kwimeko yokonakala, ngokuqinisekileyo iApple ayizukufumana nto kwaye kuya kufuneka ubhenele kwiinkonzo zomntu wesithathu. Nangona kunjalo, njengoko ubona, la ngamaqela anomyinge weminyaka emi-6, ngelo xesha, ubuncinci umsebenzisi omnye ogqithileyo uthathela ingqalelo ukuphucula izixhobo zabo ukwenza ukuba usuku lwabo lube lula. Olu luhlu luninzi okanye alufani naphi na emhlabeni, kodwa kukho umahluko othile. Iyahluka kancinane ngokwemithetho yabathengi yelizwe ngalinye. Kwimeko yeYurophu, Uluhlu lweeMacs eziphelelwe lixesha ukusukela nge-30 kaJuni zezi:
IMacBook Air: Iimodeli ze-11- kunye ne-13-intshi ukusuka phakathi ku-2011.
IMacBook Pro: Ekupheleni kuka-13 iimodeli ezili-15, 17- kunye nee-intshi ezili-2011.
these ProImodeli ye-17-intshi ukusukela phakathi ku-2009.
Olu luhlu aluchaphazeli kuphela iikhompyuter ze-Mac, kwaye iApple yenza isizukulwana sokuqala i-Airport Express kunye ne-iPhone 3GS iphelelwe lixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ezi ziimveliso ezingasasebenziyo zika-Apple ngoJuni 30, 2017
Apple Park, Apple Music cost, MateBook X, iTunes 12.6.1.27, thinner iMacBook Pro nezinye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Guqula i-TrackPad yakho yeMacBook ibe yikhiphedi enamanani ngale nto ifumanekayo